Soomaalida ku nool Koonfur Afrika oo soo dhaweysay shirkii lagu soo gabagabeeyay Garoowe – Radio Daljir
Cape Town,Dec,24 -Bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Koofur Africa ayaa soo dhaweeysay wajiga labaad ee shirkii wadatashiga ee kasocday magaalada Garoowe,iyagoona sheegay in qodobadii shirka kasoo baxay inay noqon doonaan kuwa miro dhala.
Bulshada kunool dalka Koonfur Afrika ayaa u mahad celiyay dawladda Puntland sida ay ugu dadaalayso isu keenida dadka Soomaaliyeed,waxaana ay sheegeen in muhiimada shirku ay tahay in lagu qabtay dalka gudihiisa.
C/naasir Shiikh C/kariin oo kamid ah Somaalida kunool dalka Koonfur Afrika ayaa sheegay inuu aaminsanyahay in shirku uu noqdo mid wax badan soo kordhiya,maadaama lagu qabtay gudaha dalka.
Faadumo Maxamuud Maxamed oo fikirkeeda cabiraysay ayaa sheegtay inay rajaynayso in shirku wax badan soo kordhinayo,lagana soo saaro qodobo dalka wax badan ka badala laguna soo afmeero dhibaatada dabada dheeratay.
Bulshada Soomaaliyeed ayaa soo dhaweeysay shirka lagu qabtay magaalada Garoowe ee caasumada dawladda Puntland,kaasi oo diiradda lagu saaray dib u habaynta baarlamaanka iyo arimaha dastuurka ee dowladda faderaalka KMG Soomaaliyeed.